डीग्री गरेका एक जना व्यक्ति खाना खाने लाइनमा (भिडियो हेर्नुहोस) – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ समय: १०:०२:१२
काठमाडौं : काठमाडौको मैतीदेवीस्थित सेतो पुल नजिकै विगत २४ दिनदेखि यु’बट्युब पत्रकार संघद्वारा निशुल्क भोजन गराउने कार्य भैरहेको छ । यो कार्य गंगा हल अगाडि पनि हुँदै आइ रहेको र अन्य विभिन्न ठाउँमा बिहान बेलुकै चलि रहेको छ।यदि लकडाउनले कसैलाई प्रभाव पारेको छ भने त्यो वर्ग भनेको गरिखाने बर्ग हो। त्यसैले विगत २४ दिनदेखि नेपाल युबट्युब पत्रकार संघले भोजनको अभियान सुरु गरी गंगा हल अगाडि पनि प्रत्येक दिन बेलुका साँझ साँढे पाँच बजे देखि खाना खुवाउने कार्यक्रम राखिएको छ।
त्यसपछि घुम्ती सेवा सुरू गर्दै कलंकी,कालीमाटी हुँदै मैती देवीमा समेत गएर सेवा दिँदै आइरहेको छ।यहाँ जो व्यक्ति हरूले खाना खान आउनुभएको छ उहाँहरू बास्तवमै यो लकडाउनले पिडीत भइ केही नपाएर आउनुभएको हुन्छ।यो केवल प्रचार नभएर नेपाल सरकारले कोहि पनि भोकै मर्दैन,कोहि कसैले पनि मागेर खानु पर्दैन भनेर बकम्फुसे कुरा गरिरहेको भएर सरकारलाई यथार्थ देखाउनकै लागि यो अभियान सुरु गरिएको हो।
खासगरी यो सरकारले गर्नुपर्ने काम भएयतापनि यो महामारीको समयमा भोकभोकै जनता तड्पीरहेको देखिरहँदा युबट्युब पत्रकारहरू मानवीय हिसाबले नसोची कन त्यत्तिकै बस्न नसकी यो अभियानमा सरिक हुन पुगेका हुन्। रातिको समय,पुलभरी लाइनबद्ध भएर केवल छाक टार्नकै लागि यसरी बस्नु भनेको कसैको रहर नभएर बाध्यताको उपज हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ।
किनभने यतिबेला रोगबाट जोखिम त त्यसैपनी छँदै छ त्यहुमाथी भोकले छटपटिनु पर्ने पीडा,यहाँ भन्दा कहालीलाग्दो अवस्था अरू के नै पो हुनसक्ला र! त्यही लाइनमा पुलको डिलमा एकजना खाना खाँदै गरेका व्यक्ति भेटिन्छन् र उनले तपाईं यहीँ खाना खुवाउने समूहको हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्छन्, र त्यसपछि प्रेम पुन उहाँ नजिकै जानुहुन्छ र आफू यसै खाना खुवाउने ग्रुपसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी गराउँछन्।
त्यसपछि अलिक उत्साहित हुँदै भोलिदेखी खुर्सानी पनि ल्याउनुहोला है भन्छन् र त्यहाँ भएका अधिकांशलाई खुर्सानी खान मन पराउने हुनसक्छन् भन्दै खुर्सानी ल्याउन आग्रह गर्छन्। त्यसपछि पत्रकार प्रेम पुन अलिक नजिक पुग्छन् उनको बारेमा सोध्छन्।त्यी व्यक्ति आफ्नो पहाड घर काभ्रे बताउँदै हाल मोरङ जिल्ला उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. भएको र आफू गौतम थर भएको बताउँछन्।
उहाँ भन्नुहुन्छ ,”मैले सोसोलो जीमा एम ए सकेर अहिले पोलिटिकल साइन्समा एम ए गर्दै छु। अहिले टोखामा कोठा लिएर नसेको छु र मेरो कोठामा खाने चामल सकिएर यसरी बाहिर खाँदै छु। चामल छैन,केही उपाय नभएर चुल्हो मा’रेर हिँडेको हुँ म।” उनी फेरि पनि पत्रकार प्रेम पुनलाई खुर्सानी चाहिँ नबिर्सिनु होला है सम्झाउँछन् र आफ्नो खुर्सानी खाने बानी भएको भन्दै कुरा गर्छन्।
त्यसपछि उनले युबट्युब पत्रकारहरूले गर्नुभएको कामको प्रशंसा गर्दै खासमा सरकारले गर्नुपर्ने काम भएको उल्लेख गर्छन्। उहाँ भन्नुहुन्छ,” सरकारले एक त धेरै मान्छेहरूलाई उपचार दिन सकेन, भ्याक्सिन समेत दिन नसकेर धेरै जना मानिसले ज्या’न गु’माउनु पर्‍यो।नसोचेको मान्छे म,रिरहेका छन्। जस्तै- उदाहरणका लागि बिबेकशील पार्टीका पूर्व अध्यक्ष उज्ज्वल थापा, दोलखाका पशुपति चौलागाईंको मृ,त्यु भयो।
मै आफैंले भेटिरहेका मान्छेको मृ,त्यु भैरहेको छ। सरकारको कमजोरीले औषधि नपाएर, अक्सिजन नपाएर अक’ल्पनीय मान्छेहरू म’रे।” एकजना व्यक्ति त्यहीँ खाना खाने लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँको खुट्टा पनि राम्रोसँग चल्दैन प्यारालाइसिसको कारणले, तीन जना छोराछोरी थिए उनीहरू पनि म,रिसके। श्रीमतीलाई पनि आफूसँग केही नभएको भन्दै माइती पठाइदिए उनले।
उनको बुबा पनि बित्नुभयो। त्यही खुट्टामा कुकुरले टोकि दिएको देखाउँदै उपचार समेत गर्न नपाएकोले हिँड्न नसके को बिलौना गर्छन्। “अर्कोतर्फ काठमाडौबाट धेरै मान्छेहरू त गाउँ नै फर्किए । बसेका मान्छेहरूलाई खानाको समस्या भयो। काठमाडौको ठाउँमा कसैले एक पैसा त सापट दिँदैन तसर्थ म,र्नु भन्दा बाँच्ने केही उपाय त गर्नैपर्यो भनेर खाना खान आएको हो।
काठमाडौको ठाउँमा बाध्यता भएर म यो खाना खाँदै छु, म यसलाई नराम्रो भन्दिन किनभने त्यही मन्त्रीले पनि यहाँ भन्दा राम्रो खाना खाँदैन होला । नेपालीको पैसा लु’टपाट गरेर त जे पनि खालान्, खसीको मासु खालान् या त बियर खालान् त्यो बेग्लै कुरो हो।तर मलाई चाहिँ यहि खाना खान मन लागेर खाँदै छु।” उनले भने। भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।